RFA အဖွဲ့သား ဦးခင်မောင်ညိန်းက စီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပြီး၊ ဧည့်သည်တော်တွေအဖြစ် အာရှလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တာဝန်ခံ ရှေ့နေဦးမင်းလွင်ဦးနဲ့ တပ်မတော် ဗိုလ်ကြီးဟောင်း စိုင်းဝင်းကျော်တို့ ပါဝင်ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ရခိုင်ကိစ္စပိုလို့အရေးကြီးပါတယ် ဒါကြောင့် အစိုးရအနေနဲ့ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားတွေကို ခုလို ဒုက္ခပးနေမဲ့အစား တိုင်းရင်းသား ရခိုင်အရေးကို ခုလို ဖြေရှင်းရင် အင်မတန်မှကို ကောင်းပါလိမ္မယ် အမှန်ကို အစိုးရအနေနဲ့မြင်တတ်လာတဲ့နေ့ဟာ တိုင်းပြည်ကြီးအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ကောင်းလာပါလိမ္မယ်
Feb 15, 2013 08:37 AM
ကချင်လူမျိုး ကေအိုင်အေ၊ကေအိုင်အို ကိုအမြစ်ဖြတ်ချေးမှုန်းမှာလားစစ်ပွဲရပ်မှာလား၊အပြောနဲ့လုပ်ရပ်ညီသောအစိုးရဖြစ်စေချင်သည်၊ပြည်တွင်းစစ်မလိုလားပါ၊ပြည်ပစစ်ကိုလည်းမလိုလားပါ သို့သော်လိုအပ်လျှင် တိုက်ပွဲဝင်ရန် အသင့်ရှိပါသည်၊
Jan 27, 2013 06:25 AM
Even Notorious Newin and Thanshwe did not use such forces to attack the Kachin. The most heavy Military Assaults in Burmese History is done to the Kachin. This War Simply recognize that Kachin is not the member of the Union butaSeparate Nation.
Jan 25, 2013 06:15 PM
မကောင်းပါဘူး စစ်မှန်သမျှ ဘာစစ်မှမကောင်းဘူးလို.ထင်ပါတယ် လူလူချင်းသတ်ဖြတ်နေတာမဟုတ်လား လူသားချင်းစာနာမှု တကယ်ရှိကြမယ်ဆိုရင်စစ်ပွဲတွေဆိုတာကမ္ဘာမှာ ရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး ကျွှန်တော်ကတော့စစ်ပွဲကိုမုန်းတယ် ။
SEIN AUNG MIN